July 2019 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Jul 31, 2019 0
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Taariikhda Hijriguna waxay ku beegan tahay 29…
Duqeyn lagu garaacay Saldhiga Kenyaatiga ee Ceel-waaq.
Guutooyinka Madaafiicda ee ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa duqeyn xoogan ku garaacay saldhiga ay ciidamada Kenyaatigu ku leeyihiin duleedka degmada Ceel-waaq ee gobolka Gedo. Madaafiic cul culus oo laga rido qoriyaasha…
cusmaan	 Jul 31, 2019 0
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Arboco taariikhda Hijriguna waxay ku beegan…
cusmaan	 Jul 30, 2019 0
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Taariikhda Hijriguna waxay ku beegan tahay 28…
Dhageyso Ciidanka Bankaraf oo Shacab Ku Gumaaday Tuulo Hoos Tagta Wanlaweyn.
Axmad	 Jul 30, 2019 0
Dhacdo argagax leh ayay ciidamada Bankrafta ee ka amar qaata Maraykanka ka geysteen tuulada Yaaqdhuub oo hoostaga degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha hoose. Duhurnimadii maanta ayay ciidamadan ku duuleen dad beeraley ah oo ku sugnaa…
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Talaado taariikhda Hijriguna waxay ku…
Video+Sawirro: Beeraha Dalkeena Maan Ku Baahi Beelno Qeyb Cusub (Gobolka Bay)
Warbaahinta Islaamiga ah ee Al-furqaan waxay idiin soo gudbineysaa warbixin muuqaal ah oo ay ka diyaarisay wax soo saarka gobolka Bay, gaar ahaan Beeraha. Warbixintan oo ah qeybta labaad ee silsiladda (Beeraha dalkeena maan ku baahi…
Sawirro: Hay’adda Al ixsaan oo Raashin Ka Qeybisay Jubbada Dhexe.
Jamciyadda Kheyriga ah ee Al-ixsaan ayaa maalmihii lasoo dhaafay raashin ka qeybisay degaan hoos taga degmada Jilib ee wilaayada Jubooyinka. Deeqdan raashinka ah oo isugu jirta Bur, Bariis, Sonkor, Baasto iyo Saliid ayaa la gaarsiiyay…